Mabhuku naPilar Eyre, makumi matatu emakore ekunyora basa | Zvazvino Zvinyorwa
Kana mushandisi weinternet achinyora muinjini yekutsvaga "Pilar Eyre Libros", mhedzisiro inofumura basa remunhu anozivikanwa wenjere muSpain. Zvakanaka, kunze kwekuzivikanwa kunozivikanwa mune dzenhepfenyuro yenyika yekuteerera, munyori anozvarwa muBarcelona ane makore anopfuura makumi matatu ebasa rekunyora.
Kubva paakatanga rondedzero yake yemunyori (1985) akatakurwa nezvakazarurirwa "zvepingi", rondedzero yemunyori wechiCatalan yakachinja zvinoshamisa. Eheka, ziso rake rakakomba rekutsoropodza - rakarodzwa nehupenyu hwese muhunyanzvi - hunhu hwenhoroondo yezvinyorwa zvake zvese. Naizvozvo, Eyre anogara achiedza kuchengetedza chinangwa chinotarisa pamabhuku ake.
1 Hupenyu hwaPilar Eyre, muchidimbu
2 Mamwe emabhuku anozivikanwa kwazvo naPilar Eyre
2.1 Akapfuma, ane mukurumbira uye akasiyiwa (2008)
2.1.1 Kuda kwekumuka zvakare
2.2 Chakavanzika Frank (2013)
2.4 Rangu Randinodisisa Ruvara Ruri Kukuona Iwe (2014)
2.4.1 Kupokana uye chimiro
2.5 Yakakwana Gentleman (2019)
2.5.1 Chirongwa uye zvinyorwa
2.6 Ini, mambo (2020)
3 Chinyorwa chebhuku raPilar Eyre
Hupenyu hwaPilar Eyre, muchidimbu
Pilar Eyre Estrada akaberekwa musi waGunyana 13, 1951, muBarcelona, ​​Spain. Iye ndiye wechipiri pavanasikana vatatu, mhedzisiro yemubatanidzwa pakati pePontevedra muimbi Vicente Eyre Fernández naPilar Estrada Borrajo de Orozco. Munguva yehudiki hwake akadzidza Philosophy uye Tsamba paYunivhesiti yeBarcelona.
Zvadaro, Eyre akatanga basa rake rekunyora semapepanhau akakosha eSpanish. Pakati pavo, La Vanguardia, El Mundo, Kubvunzurudza y Muvhuro Sheet. Mukutanga kwema1990, Eyre akaita kusvetuka akananga kuterevhizheni nehunhu hwakadai saJordi González, Julián Lago, Javier Vázquez naMaría Teresa Campos. Kunyanya, akaonekwa muzvirongwa pane yeSpanish Terevhizheni chiteshi.
Mamwe emabhuku anozivikanwa kwazvo naPilar Eyre
Akapfuma, ane mbiri uye akasiiwa (2008)
Bhuku repfumbamwe raPilar Eyre inotaurira nyaya dzevakadzi vakasiyana - kugadziridzwa kune ikozvino pfungwa ye socialite- Yakatanhamara bhizinesi reSpanish rekuratidzira. Vamwe vakanaka, vamwe vanonzwisisika, uye pasina mubvunzo vese vairemekedzwa nerunako uye runako rwavakaratidza pane imwe nguva muhupenyu hwavo. Aya mamiriro ehukama aiperekedzwa nenyaya yekuumba vakaroorana nevarume vanonamatwa saivo.
Nekudaro, vakadzi ava vakave nyeredzi dzechokwadi dzezviitiko zvisingaverengeke zvezvematongerwo enyika, zvemagariro, zvehunyanzvi, zvetsika tsika ... Pakupedzisira, ivo protagonists vakanetswa nemanzwiro nevamwe vavo ndokusiiwa kune kwavo.. Ipapo iko kamwe kunzwa kwesimba uye kuyemura kwakapa nzira kune kwakadzama kurwadziwa kunoperekedzwa nekushushikana kukuru.
Kuda kwekumuka zvakare
Pilar Eyre anotora mukana wechirevo cheava protagonists kuratidza kuti ephemeral mukurumbira wakasangana sei nehutsinye husina kutsarukana hwemapinki. Nenzira imwecheteyo, munyori wechiCatalan anotsanangura maitiro ekudzoreredza pamwe nehushingi hunodiwa hwakaratidzwa nemumwe wavo kusimuka uri wega. Zvese izvi, vachiri kutenda murudo uye nekurumbidzwa kutendeseka.
Sezvo mune akawanda Eyre zvinyorwa, hunhu hwake mu Akapfuma, ane mbiri uye akasiiwa ndeyekupa (kusvika ipapo) isina kunyorwa ruzivo rwevoruzhinji maonero. Zvakare, munyori wechiSpanish anosimbisa hunhu hwakakosha - zvinoenderana nemaitiro ake - echikadzi mamiriro: kugona kuramba mumamiriro ezvinhu akaomesesa.
Mupfumi, mukurumbira uye ...
Chakavanzika chokwadi (2013)
Kune chero munyori wechiSpanish, hazvigoneke kujekesa hushamwari hwepamoyo pamusoro pake. General Francisco Franco asingamutse mablister. Mushure mezvose, ndiye murume akaunganidza masimba ese erudzi rweIberia kweanoda kusvika makumi mana emakore. Chero zvazvingaitika, Pilar Eyre haana kuzeza kunyora kana skimp pane ruzivo paakazivisa zvakavanzika zvakavanzika zve "Generalissimo".
Eyre, nemhando yake yakasarudzika yekutaura nyaya, inotora rwendo kuburikidza nezviitiko zvine mutsindo muhunhu hwedzvanyiriri weSpain. Kutanga, hunhu hunoshungurudza, umo maakaunganidza zvivakwa nekuda kwekutya kwemhuri yese kuna baba chidhakwa. Tevere, kushamwaridzana kwaFranco naCarmen Polo, mukadzi anochengetedza ane hunhu hwakaoma, anofumurwa.
Saizvozvo, Polo akarera mwanasikana wavo munzvimbo inodzvinyirira uye airatidza hunhu hwakaipisisa kumurume wake. Pamusoro pe, Eyre inoongorora nhoroondo yehumwe hwedzimwe hama dzaFranco, pamwe nevanhu vanozivikanwa panguva yeudzvanyiriri. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Ramón Serrano Súñer, iye (panguva iyoyo) Muchinda Juan Carlos naLuis Miguel Dominguín, pakati pevamwe.
Chakavanzika Frank: A ...
Ruvara rwandaifarira ndirwo girini (2014)
Iri basa rine autobiographical elementi, kusvika parinhasi, bhuku raPilar Eyre rinonyanya kurumbidzwa. Kwete pasina, Iri zita raive rekupedzisira ku2014 Planeta Prize uye mukundi weI Joaquín Soler Serrano Prize yeMabhuku. Mune consonance, veruzhinji vakagamuchira iyi nyaya yerudo iyo kukura kwayo kwakazara nezvinoshamisa zvisingafadzi.
Munguva yezhizha kuCosta Brava, Pilar Eyre anoshandisa husiku hutatu hwekuda naSébastien, anonyorera mutsamba weFrance. Rudo rwakasimba runomuka pakati pavo, kusvika padanho rekuti iye anonzwa kuti awana rudo rwehupenyu hwake. Pakarepo anonyangarika. Iyo inongosiya kumashure kwemutsara wezvinhu zvinovhiringidza izvo zvinozotungamira Pilar kuyedza miganhu yake yese.
Mune chimiro chakatsemura zvitsauko gumi nemana, iyo novel inosanganisa zvikamu zve surreal uye mibvunzo yehunhu hwepamoyo pamwe nekufambira mberi kwekuferefeta kwakaomarara. Pakati pezvinhu izvi pane hurukuro dzemunyori nevabereki vake vakafa, pamwe neruzivo rwekushanda kwake uye hukama hwemhuri.
Ruvara rwangu rwandinofarira ...
Nyoro yakakwana (2019)
Eyre akapindirana nevanhu chaivo (kusanganisira baba vake) nevamwe vatambi vekunyepedzera kuti vagadzire yakazara uye inonakidza nyaya. Nyoro yakakwana ingano inoratidza hupenyu hweCatalan bourgeoisie mukusiyana neupenyu hwakaomarara hwezuva nezuva hwevashandi.
Mauricio Casasnovas anoita kunge ane zvese muhupenyu: ramangwana rakavimbiswa semugari wenhaka kune huru fekitori yemachira, achiperekedzwa nemukadzi akanaka uye akangwara. Uye zvakare, anotungamira hupenyu huzere nehunyanzvi mairi senhengo yevakapfuma vepamusoro veBarcelona mushure meHondo Yenyika.
Asi, panguva yekushanya kukambani, anowira murudo naAmparo, mushandi waanotadza kuzvibata pamberi pake.. Naizvozvo - zvinopesana nezano rinonzwisisika rababa vake - Mauricio anozvipa iye zvakakwana kune mudiwa wake mutsva. Zvakaipisisa: Ndiwo chete wekutanga mune akateedzana sarudzo dzakasarongeka dzakasangana nemhedzisiro inomutambudza kusvika kurufu rwake.
Muchinda akanaka ...
Ini, mambo (2020)
Panguva ino, Eyre anozvinyudza zvizere muhupenyu hweimwe yeanowanzo kuve maficha pabutiro remapepanhau eSpain nhasi: Juan Carlos I. Tiri kutaura nezveumwe wemadzimambo akakosha (kana asiri iwo akakosha) mune yekudyidzana kweEuropeanhasi. Nenzira imwecheteyo, aive mambo akapiwa aura isingakundiki yekukudzwa ... kusvika pakuderera munguva yezana ramakumi maviri nemasere.
Ndezvipi zvikonzero zvekurasikirwa kwakadaro kwekukudzwa? Kwaiva makaro here, zvimwe tenzikadzi, kana kuti zvimwe kuzvitutumadza kwake kukuru? Pilar Eyre anoongorora imwe neimwe yezvataurwa pamusoro apa achipa muverengi ruzivo rwehukama hwamambo.. Kubva paudiki hwake semupupuri wababa vake naFranco, kuburikidza neyevadiki Casanova mudiki, kudzamara kusuruvara kuderera kuzere nemakakatanwa.
Ini, Mambo (Nhoroondo uye ...
Chinyorwa chebhuku raPilar Eyre
Mazita ekuremekedza akambotsanangurwa muchinyorwa chino akasiiwa kubva pane inotevera nguva.
Vips: zvese zvakavanzika zvevakakurumbira (1985).
Izvo zvese zvakatangira kuMarbella Club (1989).
Kuteerera nzira (1992).
Vakadzi, makore makumi maviri gare gare (1996).
Quico Sabaté, wekupedzisira gandanga (2001).
MaBourbons maviri kuDare raFranco (2005).
Zvakavanzika nemanyepo emhuri yehumambo (2007).
Iyo inoverengeka (2009).
Imperial kuda (2010).
María La Brava: Amai vaMambo (2010).
Kusurukirwa kwamambokadzi: Sofia hupenyu (2012).
Mambokadzi wemba (2012).
Rudo runobva kuMabvazuva (2016).
Carmen, mupanduki (2018).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku naPilar Eyre